တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထအသုတ် အီရတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဘဂ္ဂဒတ် ၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် တွန်းအားပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ ပေးအပ်လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထအသုတ်ကို အီရတ်နိုင်ငံက ကြာသပတေးနေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဘဂ္ဂဒတ်လေဆိပ်၌ ပြုလုပ်သော ကာကွယ်ဆေးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Jian Fangning နှင့် အီရတ်ကျန်းမာရေးအရာရှိများ အတူတကွတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပေးပို့လှူဒါန်းသော ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထအသုတ် အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်လေဆိပ်သို့ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ လှူဒါန်းမှုများသည် နှစ်နိုင်ငံ နှင့် ၎င်းတို့၏ပြည်သူများအကြား နက်ရှိုင်းပြီးကောင်းမွန်သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခမ်းအနားတွင် သံမှူးကြီး Jian က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ယခုလှူဒါန်းမှုသည် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်စည်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နောက်ထပ် စံနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီပေးအပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ အီရတ်နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ် ၊ လူအုပ်စုအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ်တည်ဆောက်မှု နဲ့ ကပ်ရောဂါကို အပြီးသတ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပါ များစွာအကူအညီဖြစ်စေမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာသစ် ၂,၃၈၃ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ အီရတ်နိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၂,၀၃၀,၄၉၈ ဦးထိ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အီရတ်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကာကွယ်ဆေး ပထမသုံးသုတ်ကို မတ်လ ၊ ဧပြီလ နှင့် ဩဂုတ်လများတွင် အသီးသီးလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Iraq received the first three batches of COVID-19 vaccines donated by the Chinese government in March, April, and August respectively
Photo 1- Charge d’Affaires of Chinese Embassy in Iraq Jian Fangning (left) and Iraqi health official attend the handover ceremony of the fourth batch of China-donated COVID-19 vaccines at Baghdad International Airport in Iraq, on October. 14, 2021. (Xinhua photo)
Photo2-A worker transports China-donated syringes at Baghdad International Airport in Iraq on October. 14, 2021. (Xinhua photo)